बिरामीको मृत्युपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा तनाव
तेजराज भट्ट ?????
२०७६ कार्तिक २२ शुक्रबार ११:०४:००
उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा तनाव भएको छ । उपचारमा चिकित्सकले लापरबाही गरेको आरोप लगाउँदै मृतकका आफन्तले शव बुझ्न अस्वीकार गर्दै बिहीबार अस्पताल घेराउ गरेपछि तनाव भएको हो ।
पेट दुखेपछि बुधबार बिहान ११ बजेतिर अस्पताल भर्ना भएका गौरीगंगा नगरपालिका–६, बनबेहडाका ४३ वर्षीय गगनसिंह कुँवरको बुधबार राति मृत्यु भएको थियो । सामान्य अवस्थामा भर्ना भएका बिरामीको चिकित्सकले लापरबाही गर्दा मृत्यु भएको आरोप मृतकका आफन्तले लगाएका छन् ।
‘बिहान आफैँ हिँडेर उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीको साँझ मृत्यु भएको छ,’ मृतकका आफन्त राधिका कुँवरले भनिन्, ‘पेट दुखेपछि भर्ना गरेका थियौँ । उपचारका लागि डाक्टरलाई पटक–पटक बोलायौँ, तर आएनन् । उपचार गर्न नसक्ने अवस्था भए अन्यत्र रेफर गरिदिनुपथ्र्यो । हामी अन्तै लैजान्थ्यौँ ।’
मृतकका आफन्तले उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बुधबार बेलुकीदेखि अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा शव राखेर मृतकका आफन्तले विरोध गरेका थिए । घटनाको छानबिन गर्ने, पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने, मृतकका परिवारलाई सेती अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नेलगायत सहमति भएपछि बिहीबार दिउँसो पीडित पक्षले शव उठाएका छन् ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेयले घटना कसरी भयो भन्ने बुझ्न छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले समितिको प्रतिवेदनअनुसार लापरबाही देखिए सम्बन्धित चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । ‘मृतकका परिवारको निःशुल्क उपचार गर्ने सहमति भएको छ,’ पाण्डेयले भने ।
मृतकले नियमित अल्कोहल सेवन गरेको र खाना नखाएको पाइएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । चिकित्सकको लापरबाहीका कारण सेतीमा यस्ता घटना पटक–पटक दोहोरिने गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।
कोरोनाका बिरामी बढेपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रसूति सेवा बन्द
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितको गुनासो– स्वास्थ्यकर्मी मेरो कोठामै छिर्दैनन्, उपचार गर्न नसक्ने भए काठमाडौं पठाइदिनू
सुध्रिँदै सेती प्रादेशिक अस्पतालको सेवा
डा. केसी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना
सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क परीक्षण : निजीमा चर्को शुल्क तिर्दै डेंगुका बिरामी
सांसदले भने- रुकुम पश्चिम हत्याकाण्ड मानवताविरुद्धको अपराध
सांसदहरू भन्छन्– गरिबमैत्री बजेट आएन
नेपाली भूमिमा भारतले उद्घाटन गरेको सडकमा गाडी चलाउन दिनुहुँदैन : विरोध खतिवडा
दुर्घटनामा घाइते भएकी महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु